Ukushelela kwefonti ku-KDE, Xfce nakwabanye | Kusuka kuLinux
Enye yezinto ebengizithanda ngayo I-GNU / Linux, futhi lokho kwangisiza ngokumangazayo ukuba ngisuke ngokushesha Windows, kwaba bushelelezi bombhalo.
Ngokuzimisela, angiqondi ukuthi ngingalichitha kanjani usuku lonke phambi kwedeski nge Windows XP ukushelela okubabazekayo, noma kunalokho, ungabi nokushelela nhlobo. Kepha hheyi, inhloso yami akukhona ukwenza izinkuni zokubasa esihlahleni esiwile.
Bekungekho kuze kube Windows Vista ukuthi iMicrosoft iqale ukukhathazeka ngalolu daba, kepha kuyinto ebesivele singayilungisa kuma-desktops ethu esiwathandayo isikhathi eside.
Eqinisweni, ukusatshalaliswa okunakekela le mininingwane kakhulu kunembile Ubuntu. Ake sibone izindlela esingazisebenzisa.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi amasethingi angahluka ngokuya ngekhadi levidiyo noma uhlobo lwesiqapha esisisebenzisayo, ngakho-ke lezi zindlela kungenzeka zingaphazami.
Indlela elula yokwenza ifonti ibukeke ibukekayo KDE ukuya ku Izintandokazi Zesistimu »Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza» Amafonti.
Imvamisa, isivele ilungiselelwe ngokuzenzakalela ukusebenzisa ukucushwa okunikezwe uhlelo:
Impela, singakuguqula lokhu kuziphatha, bese sikhetha inketho Kunikwe amandla, siyachofoza Setha futhi silungisa izinketho ngokuya ngezidingo zethu.
Endabeni I-XFCE futhi kulula kakhulu ukumisa ukushelela kwefonti. Ngalokhu sizokwenza Imenyu » Isethaphu » Ukubukeka » Ifonti futhi simaka inketho Nika amandla ukushelelisa komphetho Futhi njengasesimweni esedlule, sikhetha izinketho ezihambelana kahle kakhulu.
Kuzona zozimbili lezi zimo, futhi ngokuya ngesinqumo se-qapha lethu, singadlala ne- PPP (Amaphuzu nge-intshi ngayinye) esivumela ukuthi sishintshe ubukhulu bezinhlamvu.
Uma kungenzeka kungabikho nalunye lwalezi zinhlobonhlobo olusebenzayo, singaphendukela kulo Plan B, okungukuthi, i- Imodi yezandla, okungekho okunye ngaphandle kokwenza ifayili ~ / .fonts.conf bese ufaka ngaphakathi:
iqiniso iqiniso ukukhanya kwe-hintslight rgb iqiniso lcddefault
Khumbula ukuthi uma umqaphi wethu engekho I-LCD, kufanele singayinaki imigqa:
Futhi uma yena Plan B ngeke kusebenze, singahlala sifaka Ukungapheli, zombili ku Debian, Vula i-OpenSUSEnjengoba ku I-ArchLinux ngo I-AUR.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukushelela kwefonti ku-KDE, Xfce nakwabanye
Ithiphu elula futhi mhlawumbe abaningi bazosho ukuthi bebevele bekwazi, kodwa ngaphandle kokungabaza kuyasiza kakhulu.
Angazi noma ngabe ngumbuzo weGnome noma iLinux ngokujwayelekile ... .. kepha esikhashaneni esedlule ngifunde ukuthi akusadingeki wenze noma yini ukuze ube namafonti amakhulu kwiLinux. Ngamanye amagama, bekungasadingeki ukuthi "kuhlanganiswe" isitayela se-Ubuntu ngoba amaphakheji ahlobene nodaba ayeselungisiwe. Ikakhulu, angikhathazekile ngalolu daba isikhathi eside, ngaleso sikhathi okwakungikhathaza. Kunodaba lwezikrini ze-HiDPI eziphinde zibe nezinselelo ezintsha maqondana namafonti nezimpawu. Ngithemba ukuvivinya maduzane iGnome 3.10 ebonakala ngathi isebenze kulolu daba isebenzisa izithonjana ze-SVG kuphela futhi okubaluleke kakhulu ukuthola ilaptop yohlobo lwe- "retina"
Uma ufuna amafonti abukeke kahle kuzo zombili i-Chromium naku-Chrome, kufanele uphoqelele ukudala ifayela le- .fonts.conf ngaphandle kokuthi usebenzise Ubuntu noma okuphuma kukho.
Ku-Debian angibanga nezinkinga ekunikezeni. ngaphezu kwalokho, ku-KDE kubukeka kukuhle.
Ngizodlala ummeli kasathane: Ku-XP amafonti abukeke emuhle, kokuncamelayo kwesikrini usebenzise i-ClearType futhi ukushelela bekukuhle ...
Yebo, futhi iqiniso ukuthi ukuphikiswa kwe-Windows XP akuzange kungikholise nakancane. Ukuqala ngeWindows Vista, ukushelela kwefonti kuthuthuke kakhulu futhi okungenani bekufanele ukukusebenzisa.
Noma kunjalo, ukushelela kwefonti ku-GNU / Linux kupholile impela.
IWindows 8 ingcono kakhulu. maqondana no-7 nokubukwa.
Ngalokho ngivumelana nawe. Noma kunjalo, sengivele ngiyifakile iWindows Vista ngeDebian Wheezy ku-PC yami.
Kwakuyifonti ezenzakalelayo. Ku-Vista naku-7 baqala ukusebenzisa iSegoe UI, okwaba ngcono okukhulu kune-MS Sans Serif.
Yize ku-KDE kungcono kakhulu, yize kungezi ngokwakhona. Umthombo we-Aller uyajabulisa
Ngokwenza kusebenze i-ClearType, i-MS Sans Serif ibukeka ijwayelekile. Ukuqala ngeWindows Vista, i-ClearType ithuthuke kakhulu kune-Windows XP.
Awukwazi ukukhuluma kangcono nge-Debian ... Noma enye i-distro!
Kutholwe Isidumbu Sobuntu!
ukungapheli kungaba uhlelo D: p into engingayithandi babukeka be-opaque.
kungani ngenze isixhumanisi esingokomfanekiso kwesinye isibonelo sendawo: ln -s /usr/share/fontconfig/conf.avail/11-lcdfilter-default /etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default esikunikeza ukungena futhi yilokho , esitebeleni sakwaDebian womabili atholakala ku- / etc / ngakho-ke kungukucushwa okungasasebenzi, ekuhlolweni kwe-Debian / sid kusobala ukuthi kunesibonelo - enye into engaphezulu ayisebenzisi i-autohint nge-lcdfilter okungenani yilokho okushiwo yi-wiki enkulu.
Thambisa amafonti ... Kufanele usebenzise i-Terminal kuphela futhi umise ama-pops athambile, imiphumela emihle nokushintshwa okusobala.
ukuthi ukushelela kubuthakathaka ... xD
Yilokho lowo mbono.
Ku-Fluxbox, yamafonti, izithonjana, isikhombisi nezindikimba, ngisebenzisa i- "lxappearance" ye-LXDE.
Kubukeka njengenketho enhle.
* Kimi kubonakala sengathi
Angiqondi ukuthi kungani kunezinketho ezi-3 zokushelelisa.
Ngabe ethambile ithatha izinsiza ezimbalwa? Futhi ngifuna ukuthini?
Kungakuhle uma ngabe kubushelelezi u-YEBO noma u-CHA, nokuthi u-YES uyindlela engcono kakhulu.
I-OS X Mavericks imahhala futhi ifaka izinto ebesivele sinazo
Umkhumbi omusha wempi waseMelika uzosebenzisa iLinux